IATA: Kobaca Xamuulka Hawada ee Nus-Sannadkii Ugu Adkaa Tan iyo 2017
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » IATA: Kobaca Xamuulka Hawada ee Nus-Sannadkii Ugu Adkaa Tan iyo 2017
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Maaddaama isbarbardhigyada u dhexeeya 2021 iyo 2020 natiijooyinka billaha ah ay ku qalloocan yihiin saamaynta aan caadiga ahayn ee COVID-19, haddii aan si kale loo xusin, dhammaan isbarbardhigga la raacayo waa Juun 2019 kaas oo raacay qaab dalab caadi ah.
Baahida caalamiga ah ee Juun 2021 ayaa kor u kacday 9.9% marka la barbar dhigo Juun 2019.
Gaadiidleyda Waqooyiga Ameerika waxay ku biireen 5.9 dhibcaha dhibcaha kobaca 9.9% bishii Juun.
Xaaladaha dhaqaale ee hooseeya iyo dhaqdhaqaaqyada silsiladda sahayda ee wanaagsan ayaa weli aad u taageersan xamuulka hawada.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) xogta la sii daayay ee suuqyada xamuulka hawada adduunka ee bisha Juun oo muujinaya 9.9% horumar laga sameeyay wax-qabadka kahor COVID-19 (Juun 2019). Tani waxay ku riixday kororka xamuulka hawada nus-sano ee ugu horreysa 8%, waxqabadkeedii ugu xoog badnaa qeybtii hore tan iyo 2017 (markii warshadu soo dhejisay 10.2% kobaca sannad-sannadka).
Baahida caalamiga ah ee Juun 2021, oo lagu cabiray xamuulka tan-kiiloomitir (CTKs), ayaa kor u kacday 9.9% marka la barbar dhigo Juun 2019.
Kala duwanaanshaha gobolka ee waxqabadku waa muhiim. Gaadiidleyda Waqooyiga Ameerika waxay ku biireen 5.9 boqolkiiba dhibcaha (ppts) heerka kobaca 9.9% bishii Juun. Shirkadaha diyaaradaha ee Bariga Dhexe waxay ku darsadeen 2.1 budhcadood, diyaaradaha yurubiyanka ah 1.6 xabbo, African airlines 0.5 ppts iyo Asia-Pacific xambaarayaasha 0.3. Gaadiidleyda Laatiin Ameerika ma aysan taageerin koritaanka, iyagoo xiiraya 0.5 ppt wadarta guud.
Awoodda guud, oo lagu cabiray xamuul tan-kiiloomitir (ACTKs) ah, ayaa weli ku xaddidan 10.8% oo ka hooseysa heerarkii ka horeeyey COVID-19 (Juun 2019) sababtuna waxay tahay joojinta joogtada ah ee diyaaradaha rakaabka. Awoodda caloosha ayaa hoos u dhacday 38.9% heerarka Juunyo 2019, qayb ahaan waxaa lagu dheelitiray 29.7% koror ku yimid awoodda xamuulka ee gaarka ah.
Xaaladaha dhaqaale ee hooseeya iyo dhaqdhaqaaqyada silsiladda sahayda ee wanaagsan ayaa weli aad u taageersan xamuulka hawada:
Tirakoobka Mareykanka ee saamiga iibka ayaa ah mid aad u hooseeya. Tani waxay ka dhigan tahay in ganacsatadu ay tahay inay si dhaqso leh u buuxiyaan kaydkooda, oo sida caadiga ah isticmaalaan xamuulka hawada si ay sidaas u yeelaan.
Tilmaamaha Maareeyayaasha Iibsashada (PMIs) - tilmaamayaasha hormuudka u ah baahida xamuulka hawada - waxay muujinayaan in kalsoonida ganacsiga, wax soo saarka wax soo saarka iyo amarrada dhoofinta cusub ay si xawli ah ugu korayaan inta badan dhaqaalaha. Welwelkii laga qabay in macmiilku wax weyn ka beddelo badeecadaha una wareego adeegyada ma hirgelin.
Qiimaha-u-tartamidda iyo isku-halaynta xamuulka hawada marka loo eego maraakiibta weelka ayaa soo hagaagtay. Celceliska qiimaha xamuulka hawada marka loo eego dhoofinta ayaa aad hoos ugu dhacay. Jadwalka qorshaynta kalsoonida wadayaasha badda ayaa hoos u dhacay, bishii Meey waxay ahayd qiyaastii 40% marka loo eego 70-80% ka hor dhibaatada.
“Xamuulka hawadu wuxuu samaynayaa ganacsi deg deg ah iyadoo dhaqaalaha adduunku sii wado ka soo kabashadiisa xiisadda COVID-19. Iyada oo baahida qeybtii hore 8% ay ka sarreyso heerarkii xiisadda kahor, xamuulka hawada ayaa ah halbawlaha dakhli ee shirkado badan marka ay la halgamayaan xiritaanka xuduudaha oo sii wada burburinta ganacsiga rakaabka caalamiga ah. Muhiimad ahaan, waxqabadka qeybtii hore ee xooggan ayaa u muuqda mid sii socon doona, ”ayuu yiri Willie Walsh, IATAAgaasimaha Guud.